Isicanucanu - lokhu kuyinto umuzwa ongamuhle esiswini, emphinjeni kanye ngalo ingaphakathi ngomlomo. Ngokuvamile kwenzeka ngokushesha ngemva isicanucanu nokuhlanza. Ngokuvamile kuhambisane umuzwa nesicanucanu, ukujuluka, ubuthakathaka kanye amathe ngokweqile. Kuleli qophelo, umfutho wegazi, isikhumba ugodo, izandla nezinyawo ezibandayo. Isicanucanu kungenzeka ngezinye izikhathi ezahlukene zosuku lwabo kube uphawu zezifo ezihlukahlukene futhi izimo.
ukugula ekuseni. nezimbangela zayo zingase zihluke. Abesifazane ekuseni ukugula ngesikhathi sokukhulelwa. Abesilisa - ngemva kokuphuza ngosuku olwandulela semali utshwala (utshwala ubuthi). Izingane ekuseni ukugula bangase ngenxa yokuba khona izibungu emzimbeni. Ekuseni, abantu abagulayo abaye kahle umsebenzi gastro - pheshana emathunjini. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa kwenzeka ikakhulukazi izifo ze-isisu. Morning isicanucanu ekukhathaza neziyaluyalu semithambo.
Izidakamizwa isicanucanu. Izizathu ke kukhona kucacile. Imiphumela emibi yemithi abaningi isicanucanu nesiyezi. Kulesi isenzo cishe zonke izidakamizwa ngamakhemikhali asetshenziswa wokwelapha isifo somdlavuza. Isicanucanu ngokuvamile abangela zokuvimbela inzalo ezithathwe abesifazane.
Kusihlwa isicanucanu. Izimbangela isicanucanu ngalesi sikhathi, njengoba umthetho, exhumene ukusetshenziswa ngokweqile ukudla okunamafutha ntambama. Ngivame ukusabela yephutha ekondleni abantu, iziguli ezinemishini isilonda peptic noma kolwelwesi. Phakathi nenkathi yokukhulelwa bangase babe nanomuzwa ogulayo zakusihlwa. Kukhona ifomu ezingavamile isithuthwane lapho isicanucanu zenzeka ebusuku futhi ahambisana nokulahlekelwa ukwazi.
Isicanucanu noma "ezokuthutha isicanucanu." Izizathu ke zichazwe kalula. Lapho uhamba ngemoto, yendiza noma ezokuthutha zasolwandle senzeka ukucasuka lamaseli olukhethekile apharathasi vestibular, okuyinto banesibopho isikhundla umzimba emkhathini. Kodwa njengoba akubona bonke abantu ebaphatha. I degree of ezifweni ukuhamba izici kunqunywa azalwa naso apharathasi vestibular.
isicanucanu Toxic. I Lo msindo ubangelwa itholakala umphumela isikhungo emetic zobuchopho ejenti ahlukahlukene alimazayo ufake umzimba ngenxa ubuthi noma izifo ezithile.
Imbangela ezivamile isiyezi nesicanucanu nganoma isiphi isikhathi sosuku - izifo izitsha ingqondo. Migraine, umfutho ophakeme wegazi intracranial, dystonia semithambo, umfutho wegazi ophakeme, kahle-cerebral outflow emithambo yegazi - ukuthi akusiwona wonke uhlu izimo zokucabanga okubangelwa isifo ukuthi ahambisana ikhanda, isiyezi kanye nesicanucanu.
Obungapheli okulimala ebuchosheni nzima ukuxukuzeka palsy, uyohlale ukuzibonakalisa ngu isicanucanu, isiyezi kanye bekhanda. Kodwa izifo ezifana meningitis (ukuvuvukala meninges), ebonakala yokuthi ukuhlanza kwenzeka ngaphandle isicanucanu odlule.
Ukwelashwa futhi Ukunakekela
Lapho njalo kokuphazamisa isicanucanu olwenziwa ukuthola kanye nokwelashwa abangela izifo abalulekile. Uma isicanucanu kwenzeka ngesikhathi egula acute, ungasebenzisa izidakamizwa ngokuthi "Reglan" futhi "Raglan". kwakwakhe yabo esebenzayo metoclopramide. Sulpiride kunemiphumela efanayo ( "eglonil", "Imfundiso"). Kodwa namanje, umuthi oluncamelayo, oqeda isicanucanu, Aeron kuyinto. Kumelwe uthathe 1 ithebhulethi izikhathi ezimbili noma ezintathu ngosuku, Ukuqedwa kancane ngaphansi kolimi. Ngezinye izikhathi isicanucanu sihamba ngemva kokuthatha validol anestezina noma umthamo encane. It has a evelele nomphumela torekan (dietilperazin) kanye etaperazin. Amiswa ujove esicutshini e isamba 1 - 2 namamililitha. Zonke imithi Kunconywa ukuthatha somuthi nokusetshenziswa kwawo sikadokotela.
Izinzwa babancwebe esifundeni thoracic kanye nezinye izingxenye zomzimba
Turkey ukukhetha ihhotela engcono imindeni nengane
Lapho usuku igama inothi Anna?
Sikhuluma ukuthi izingcingo abandayo